Semalt Expert manazava ny fahasamihafana eo amin'ny seo SEO sy finday SEO
Amin'ny fampiroboroboana dizitaly, ny ankamaroan'ny SEO dia tsy mandinika ireo fitaovana izay mpitsidikaampiasao mba hahatongavana amin'ilay tranokala. Ny ankamaroan'ny orinasa dia manadino haingana kokoa ny tranonkala ho an'ny fahombiazan'ny finday rehefa manatanteraka azy ireotranokala fampandrosoana. Ny fanadihadiana vao haingana dia naneho fa ny finday dia manolo ny solosaina amin'ny fijerena Internet amin'ny 4% tahan'ny. Ankoatra izany,Ny ankamaroan'ny fiara fitaterana fikarohana dia avy amin'ny finday, fa tsy PC Desktop toy ny teo aloha - vemer thanos istruzioni modello.
Ny raharaham-barotra sasany dia mandray io tombony io mba hamenoana ny haben'ny tsena. Ohatra,Ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa finday handefa ny aterineto. Tamin'ny volana Janoary tamin'ity taona ity, nanazava i Google fa iray amin'ny fomba algorithmaNy tranokala isam-bolana no fomba iray entin'ny tranonkala finday.
Ny fanentanana Search Engine dia midika ho fampitomboana ny fahitana ny tranonkala iray amin'ny aterineto.Ny fitaovam-pikarohana dia mandray anjara amin'io dingana io. Ny ankamaroan'ny fepetran-dry zareo dia ny fanaovana tranonkala finday. Avy amin'ny mpandrindra webNy fomba fijery, ny ankamaroan'ny tranonkala SEO ho an'ny tranonkala finday dia miasa tsy mitovy amin'ny fomba fiasan'ny Desktop.
Ny SEO amin'ny finday dia tsy mitovy amin'ny seo birao SEO. Ny manam-pahaizana Semalt Tolotra nomerika, Ross Barber nanazava ny lafiny mampiavaka azy.
Famaritana ny valiny..Google dia mametraka ny vokatra eo an-toerana ho an'ny findayfitaovana. Ity fanatsarana ity dia mahatonga ny SEO eo an-toerana ho tsara ho an'ny tranonkala finday. Ny fikarohana natao tamin'ny geo-mody dia mety hahatratra ny fitaovana mandeha haingana kokoa noho nyMankany amin'ny solosaina izy ireo. Mandritra izany fotoana izany, ny fomba fitoviana eo amin'ny sehatry ny birao dia mety hitarika amin'ny votoaty duplicate amin'ny sehatra maro. Vokany, ny ankamaroanyTsy raharahian'ny orinasa io fahasamihafana io. Na izany aza, afaka mahazo tombontsoa amin'izany ianao amin'ny fampiasana domains kanonika ho an'ny tranokala Desktop. Mandritra izany fotoana izany,Ny fanatsarana ny votoaty ao amin'ny tranonkalanao findainao dia hamerina indray ny rohy sy ny pejy mitondra anao amin'ny alàlan'ny 301 redirects.
Fanondroana ny bokotra an-tsehatra. Ny ankamaroan'ny mpampiasa aterineto dia mandeha amin'ny tranokalan'ny fampahalalam-baovao nafividianana. Ny finday dia mila bokotra lehibe. Io endri-javatra io dia ahafahan'ny mpampiasa smartphone tsy manana olana amin'ny alok'izy ireofahan'ny. Na izany aza, dia mety hanavatsava ny rohy akaiky sy tsindrio ny sombin-kihehehehehehehehehehehehehehehehehehehe izany.
Content. Ao amin'ny tetik'asa marketing dikan-teny, ny teny sy ny votoaty no tena hevi-dehibe.Ny fampivoarana ny Search Engine dia mitodika amin'ny teny sy ny votoaty. Na izany aza, ny fomba ametrahana teny fanalahidy ao amin'ny tranonkala finday dia tsy fombaMijanona eo amin'ny tranonkala bureau izany. Ohatra, ny desktop dia mitaky ny lanjan'ny marika sy ny fandrakofam-baovao. Noho izany antony izany, ny votoatin-desktop dia afakaAfaka mahatratra hatramin'ny teny 1000 ary tokony hiditra amin'ny endritsoratra kely kokoa mba hampidirana votoaty tsara. Na izany aza, tsy izany no zava-misy ho an'ny namana mahafinaritratranonkala. Ny navigateur an-telefaona dia miasa tsara indrindra amin'ny endritsoratra lehibe sy ny votoaty miisa 300 ka hatramin'ny 700.
Maro ny orinasa tsy mahomby amin'ny fandraisana an-tanana ankafizina rehefa manangana azy ireotranonkala. Misy fomba maro samihafa izay tsy mitovy amin'ny SEO finday SEO. Ohatra, ny teknolojia SEO finday dia mampiasa ny fampiasana kelyao anaty fonosana lehibe izay mifanohitra amin'izay tadiavin'i Google amin'ny toerana fametrahana ao amin'ny desktop PC. Betsaka ny orinasa nanao izanyNy alàlan'ny tranonkala finday dia efa nahazo tombontsoa avy amin'ity tetikady ity. Noho izany, ireo fahasamihafana ireo dia afaka manampy ny SEO fampielezan-kevitrahampitombo ny fivoahana sy hahazo mpitsidika maro avy amin'ny fitaovana finday.